८ असार, काठमाडौं । नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोपको परीक्षणका लागि बाटो खुलेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा उत्पादन/अध्ययन/परीक्षण भइरहेका खोपलाई नेपालमा पनि परीक्षण गर्न सक्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै बाटो खुलेको हो ।
मंगलबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयले नेपाली जनताले खोप पाउने विषय पनि सहज हुने बताए । अहिले विश्वभरिका जनताले लगाइरहेको खोप पनि परीक्षणमै रहेकोले नेपालले खोप उत्पादक कम्पनी अथवा देशलाई परिक्षणको लागि अनुरोध गर्न सकिने बताए । परिक्षण गर्न आउने खोप उत्पादकले र त्यो देश जनताको अधिकतम हितलाई ध्यान दिएर काम गर्ने हुँदा अन्यथा लिन नहुने पनि डा. ज्ञवालीले बताए ।
नेपालमा हेपाटाइटिस, कालाजार, मलेरिया, जापनिज इन्सेफ्लाइटिस जस्ताको सफल परिक्षण भएकोले कोरोना विरुद्धको खोपको परिक्षण पनि फाइदाजनक हुने डा. ज्ञवालीले बताए । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले कोरोनासम्बन्धी विभिन्न अध्ययन गरिरहेको बताएको छ । साथै आगामी असार १७ र १८ गते काठमाडौंमा बृहद सम्मेलन गर्न लागेको छ ।
आईपियु गभर्निङ काउन्सीलको २०६ औं अधिवेशन, सभामुख सापकोटाले गरे मतदान
नक्कली पासपोर्ट प्रकरणमा पक्राउ परेका रोनाल्डिन्हो अन्ततः पाराग्वेको हिरासतबाट छुटे
जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दर्ता
हेभि इक्विपमेन्ट क्षेत्रमै पहिलोपटक भर्चुअल माध्यमबाट नयाँ एक्साभेटर सार्वजनिक
लुम्बिनी प्रदेशमा दर्ता दस्तुर छुट भएपछि एक महिनामै ३५९ उद्योग दर्ता